Global Voices teny Malagasy · 8 Avrily 2019
08 Avrily 2019
Tantara tamin'ny 08 Avrily 2019
Fantaro i Zaituni Njovu, vahinin'ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang amin'ny 3-9 Aprily
Antsafa08 Avrily 2019
Fantaro i Zaituni Njovu, vahinin'ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang tamin'ny 3-9 Aprily 2019
Manohana ilay poeta an-dalambe voasazy handoa onitra ny tambajotra sosialy Kolombiana
Amerika Latina08 Avrily 2019
Niteraka resabe tao amin'ny tambajotra sosialy Kolombiana ny tantaran'i Espicasa, poeta an-dalambe voasazy handoa onitra ary nitarika adihevitra manerana ny firenena momba ny andraikitry ny tononkalo eo amin'ny fiainam-bahoaka.
Syria: Nosamborina indray i Razan Ghazzawi
Syria08 Avrily 2019
Nisambotra ilay bilaogera Syriana sady mpiaro ny fahalalaham-pitenenana Razan Ghazzawi ny mpitandro filaminana Syriana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny biraon'ny Foibe Syriana ho an'ny Fahalalaham-pitenenana ao Damaskaosy.Faharoa izao no nisamborana an'i Razan Ghazzawi.Niteraka fisalasalana ho an'ireo mpisera aterineto ny vaovao izay tsy ela akory dia naneho hevitra.
“Aza matahotra aterineto”: Midika fanehoan-kevitra ny famoronana
Mediam-bahoaka08 Avrily 2019
Mampiahiahy hatrany ny famoronana, ny fampahalalana ary ny fisainana amin'ny fomba hafa.Ao amin'ny lahatsary vaovao, mandrisika ny mpisera aterineto ny NGO Derechos Digitales mba "tsy hatahotra ny aterineto" ary hanohana ny tontolo an-tserasera izay mankany amin'ny fanaovana demokratika ny kolontsaina.
Azia Atsinanana08 Avrily 2019
Saingy ireo cybercafés izay voasoratra anarana ara-dalana ihany no azon'ny departementan'ny fifandraisandavitra tapahina ny fifandraisany. Tsy hiantraika amin’ny ankamaroan’ny cybercafé voarara izany satria tsy manana dosie ara-dalàna izy ireo.
Filoha Chávez sy ny “ady anaty akatan-tserasera”
Venezoela08 Avrily 2019
Nanangana ny programa antsoina hoe "Communicational Thunder" [kotroka ara-tserasera] ny filoha Venezoeliana Hugo Chávez, mba "hiatrika ny lainga sy ny vaovao diso aelin'ny haino aman-jery tsy miankina". "Tsy maintsy atao isan'andro ny tolon'ny fampitam-baovao", hoy izy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Avrily 2019
Tonga ao Libya androany ny sekreteram-panjakana Amerikana, Condoleeza Rice, ary hihaona amin'ny mpitarika Libyana, Muammar Al Gaddafi." Nankasitrahan'ilay bilaogera ny fitsidihana, izay voalohany nataon'ny sekreteram-panjakana Amerikana tao anatin'ny 50 taona mahery, saingy nametraka fanontaniana tahaka ny hafa ihany koa izy.